Sidee baan u sameeyaa backlinks boggayaga internetka ugu fiican?
Ka hor inta kale, ha aan wajahno - Google, iyo sidoo kale inta badan makiinadaha raadinta waaweyn, dhab ahaantii ma doonaysid inaad ku kalsoonaato boggagaaga ama blogka. Aniga ahaan, waa inaan bixiyaa wakhti badan iyo dadaal si aan u abuuro boggeyga shabakaddayda oo leh hal ujeedo fudud - in aan ku qanciyo Google in websigeygu uu yahay mid runtii awood u leh, taas oo lagu kalsoonaan karo dadka raadinaya, sidaas awgeed si macquul ah ayaa lagula talinayaa laguna soo bandhigey dhagaystayaal balaaran oo ku yaal liiska SERPs. Si kale marka loo eego, markii aan dib u isticmaali lahaa boggeyga internetka, waxaan ka fekerayey xiriir kasta oo ah nooc ka mid ah ansaxinta dhinac saddexaad. Sidaa darteed, waxaan ku socdaa iyada oo leh beerashada kaliya tayada dhabta ah. Ugu dambeyntii - si aan u bedelo boggeyga si buuxda kalsooni la isku halleyn karo oo la isku halayn karo oo bixiya qiime ka badan oo dhabta ah oo la isticmaalayo iyada oo la adeegsanayo boggeeda asalka ah iyo mid gaar ah.
Waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan oo loo qaabeyn karo astaan ​​adag oo ujeeddo ujeedo SEO ah. Iyo in aan dib u abuuro boggeyga internetka, shakhsiyan waxaan diiradda saarayaa waxyaabaha muhiimka ah ee istiraatiijiga ah - marka hore iyo ugu horreynba. Ma ahan oo kaliya sababtoo ah waxaan arkey inaan dib u heleyno waxyaabo tayo sare leh oo run ahaantii la heli karo ganacsiga yaryar, laakiin maxaa yeelay waxay run ahaantii u shaqeysaa - abuurista waxyaabo waxtar leh oo soo dhaweyn kara qaybinta, wadaagista, iyo isku xirnaanta-ilaa dhan. Sidaas, waxaan hoosta ku socdaa inaan ku tuso hababka ugu waxtarka leh ee ku jira mowduucyada aan si guul leh u isticmaalay inaan dib u abuuro boggayaga internetka, iyo inaan horumariyo horumarka SEO ee miisaanka oo dhan. Raac tallaabooyinkan sahlan oo fudud iyo wajiyo munaasab ah si aad u hesho istaraatiijiyada dhismaha isku midka ah ee macaamiisha aniga ahaan.
Go'aami Macluumaadkee Ku Saabsan Dhageystahaaga Ugu Fiican
Ugu horreyntii, ka fakar nooca nooca saamiga la wadaagayo ee ugu fiican ee loogu talagalay daawadayaashaaga bartilmaameedka. Muuqaal ahaan, wax kasta oo ganacsi ama ganacsi, dadku waxay si fudud u raadinayaan nuxuro internet ah oo si fiican u qoran oo ay tahay inay noqoto mid xiiso leh, faa'iido leh oo munaasib ah - oo dhan. U fiirso hareerahaaga gaarka ah iyo in aad qaadato go'aan qoto-dheer oo ku saabsan noocyada maaddooyinka, kuwaas oo si weyn u wada baabi'iyay akhristayaasha si loo wadaago marka la akhriyo, la xuso, ama lala xiriiro. Shuruudaha guud, noocyada ugu fiican ee la wadaagi karo iyo qiimaha qiimaha leh waxay daboolayaan tilmaamaha mawduucyada, barashada kiisaska, cunto kariska, liis-hubin leh talooyin iyo khibrado la taaban karo, sida sugidda, iwm.
Cilmi-baarista iyo Horumarinta Qodobkaaga gaarka ah ee la wadaagi karo
Wax kasta oo halkan ku yaala waxay ku dhow yihiin is-sharaxaad - sida aad u baahan tahay waa inaad abuurto wax qiimo leh oo leh muhiim ah istaraatiijiga istiraatiijiga ah ee muhiimka ah. Kaliya ha ahaato cilmi-baarista muhiimka ah ee agabyada falanqaynta ah ee faahfaahsan ayaa muujinaya waxa ay dhagaystayaashu raadinayaan, qoraallada ay aad u qadariyaan dadka, iyo kuwa ugu dambeyntii looga dalbado iyaga dhexdooda.
Ma jiro istaraatijiyad gaar ah halkaas, laakiin waxaan go'aansaday inaan haysto boodh gaar ah oo shirkaddayda ah si aan u abuuro backlink ah website-ka ganacsiga. Sidoo kale waxaad tixgelin kartaa sameynta xarun macaamiisha internetka ah, tusaale ahaan mawduucyada ugu muhiimsan ee mawduuca ama su'aalaha & jawaabaha qaybaha badanaa waydiiyaan macaamiishaada. Habkaas, kaliya kuma dhisi doontid dad badan in ay wadaagaan content-kaaga iyo isku-xirnaantaada laakiin waxaad dhiseysaa awooddaada iyo kalsoonidaada xooggan ee dadka isticmaala. Taasna waxaa ku farxi doona Google, oo ku abaalmarinaysa jagooyinka sare ee boggaaga ama blog-kaaga. Kaliya si joogta ah u shaqee oo ha baqin inaad maalgeliso wakhtiga iyo dadaalkaaga - kuwaas oo markasta bixinaya, waan hubaa Source .